Seychelles iyo Shanghai Changfeng Ocean World ayaa si wada jir ah u Daahfuray Ololaha Xagaaga “Dunida Dacaladeeda”
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles iyo Shanghai Changfeng Ocean World ayaa si wada jir ah u Daahfuray Ololaha Xagaaga “Dunida Dacaladeeda”
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles oo ku wareegsan Ololaha Xagaaga Adduunka
Dalxiiska Seychelles oo ay weheliyaan Shanghai Changfeng Ocean World (oo ah goob heer-heer AAAA ah oo ku taal jardiinada Changfeng ee badhtamaha magaalada Shanghai.), Oo hoosaad u ah madadaalada madadaalada caalamiga ah “Merlin Entertainment” (shirkadda labaad ee ugu weyn ee jardiinada mawduuca adduunka ). Soo -booqdeyaasha, gaar ahaan qoysaska carruurta leh ayaa lagu casuumay inay soo booqdaan oo ay la kulmaan ololaha “Dunida Dacaladeeda” si loo sahamiyo badaha adduunka.
Taariikhda dheer ee Seychelles ee dadaallada ilaalinta deegaanka ee joogtada ah iyo dalxiiska waara, waxay u abuurtaa dalxiis muhiim u ah socotada mustaqbalka.
Ololaha fasaxa xagaaga ee “Adduunka oo dhan” waxaa daahfuray bandhigga Dalxiiska Seychelles.
Ololaha fasaxa xagaaga wuxuu socon doonaa dhammaan fasaxa xagaaga bilaha Luulyo iyo Ogosto 2021.
Dalxiiska Seychelles ma aha oo kaliya in la xoojiyo iskaashigan si loo sii wado kor u qaadista wacyiga iyo caannimada Seychelles oo ah meel ay maraan dadka socotada ah, laakiin sidoo kale waxay wadaagaan aqoonta nolosha badda Seychelles, deegaanka dabiiciga ah, caadooyinka maxalliga ah, oo diiradda la saarayo fikradda dalxiiska waara.
“Tani waxay ku soo beegmaysaa xilli isbeddel ah marka macaamiishu ay si aad ah diiradda u saaraan ilaalinta deegaanka iyo waaya-aragnimada ku saleysan dabeecadda sababtuna tahay masiibada COVID-19. Seychelles'taariikhda dheer ee dadaallada ilaalinta deegaanka ee joogtada ah iyo dalxiiska waara, waxay u abuurtaa dalxiis muhiim u ah socdaalayaasha mustaqbalka iyadoo dunidu si tartiib tartiib ah u bilaabi doonto inay furto isbaddallada cusub ee baahida macaamiisha' ', ayuu yiri Mr. Jean-Luc Lai-Lam, Agaasimaha Shiinaha .
Ololaha fasaxa xagaaga ee “Adduunka oo dhan” waxaa daahfuray bandhigga Dalxiiska Seychelles oo socday 2 toddobaad. Iyada oo la adeegsanayo fiidyowyo, sawirro, iyo is -dhexgalyo kala duwan (tusaale. Carruurtu waxay wax ka baran karaan nolosha badda ee kala duwan ee badweynta Seychelles oo waxaa la siin karaa kaarar ay ku rinjiyeystaan), booqdayaasha (gaar ahaan qoyska carruurta leh) ayaa la kulmi kara, oo wax badan ka baran kara Seychelles, iyo dabiicigeeda deegaanka, nolosha badda iyo fikradaha dalxiiska waara.
Ololaha fasaxa xagaaga ee “Around the World” wuxuu socon doonaa dhammaan fasaxa xagaaga bilaha Luulyo iyo Ogosto 2021, halkaas oo Singapore, UK iyo Fiji ay midba mar u wareegi doonto Seychelles si ay u qabtaan bandhigooda u gaar ah 2 toddobaad midkiiba.